Apple Pay dia efa eken'ny mpivarotra iray amin'ny roa any Etazonia | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny nampidirina azy tamin'ny taona 2014, Apple Pay dia nanjary fomba tsy dia mahazatra loatra handoavana vola isan'andro. Isan-kerinandro dia manavao ny lisitry ny banky sy andrim-panjakana mpampindram-bola indrindra any Etazonia i Apple, izay misy amin'izao fotoana izao arivo mahery no tohana.
Raha ny filazan'i Jennifer Bailey, filoha lefitra an'ny Apple ary filohan'ny Apple Pay, dia nanambara tao amin'ny NFR 2018 fa atao any New York io andro io satria ny iPhone dia nanova ny fomba fiasan'ny magazay ary ny fomba fanohizan'ny orinasa ny ezaka ataony hanatsarana ny rafitra fandoavam-bola amin'ny finday.
Tamin'ny fihaonambe "The Modern Shopping Experience Experience" an'i Jennifer, Bailey dia nanolotra vaovao mahaliana momba ny fitomboana sy ny fananganana Apple Pay, ary koa ny hetahetan'ny Apple amin'izao fotoana izao sy ny ho avy eo amin'ny sehatry ny fandoavam-bola amin'ny finday. Araka an'i Bailey, iPhone dia mitarika ny fividianana ataon'ireo finday avo lenta sy takelaka misy fizarana 25% any Etazonia. Ny tahan'ny fitomboan'ny fifanakalozana finday dia avo efatra heny noho ny fifanakalozana elektronika vita amin'ny alàlan'ny solosaina ary avo folo heny noho ny fifanakalozana ara-barotra mahazatra.
Tranga mitovy amin'izany no mitranga any ivelan'i Etazonia. Sina, ohatra, dia nahita ny fomba Ny 80% amin'ny fifanakalozana elektronika dia tanterahina amin'ny alàlan'ny finday. Tamin'ny fotoana nanombohany, Apple Pay dia voafetra ho 3% amin'ny magazay. Androany dia efa misy amin'ny 50% amin'ny magazay rehetra manerana an'i Etazonia izy io. Ankoatry ny fanekena ara-tsosialy an'ity sehatra ity, Apple Pay dia nanjary andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny varotra amin'ny alàlan'ny fitaovana finday eo amin'ireo mpivarotra noho ny fahatsorany sy ny fahafahany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple Pay dia efa eken'ny mpivarotra iray amin'ny roa ao Etazonia